Mogadishu Journal » Messi oo gacan u taageen Vidal iyo Xavi ka dib markii uu barbariyo rikoorkii Barcelona
Messi oo gacan u taageen Vidal iyo Xavi ka dib markii uu barbariyo rikoorkii Barcelona
Xavi wuxuu hayey rikoorka muuqaalka Barcelona ilaa maestro-ka reer Argentine Lionel Messi uu la mid noqday wadartiisa kulankii LaLiga ee Huesca.
Lionel Messi ayaa lagu amaanay inuu yahay "kii sixirka ahaa" ka dib markii uu barbareeyay rikoorkii Xavi ee kulamadii Barcelona waxaana uu ku calaamadeeyay guusha labo jeer oo uu ka dhaliyay Huesca.
Xiddiga reer Argentine ayaa ciyaaray kulankiisii ​​767-aad ee Barca Isniinta waxana uu dhigi doonaa rikoodh toos ah hadii uu Axada wajaho Real Sociedad.
Saaxiibkiisii ​​hore ee kooxda Barcelona Arturo Vidal ayaa ku soo qoray bartiisa Instagram: "Hal walaal rikoor kale @leomessi. Waxaad tahay macalinka kubada cagta. Waxaad tahay kan ugu fiican, heer caalami, midka kaliya, ee sixirka ah."
Vidal, oo ka tagay Barcelona kuna biiray Inter bishii Sebtember ee la soo dhaafay, ayaa intaa ku daray: "Xaqiiqdii waad sii wadi doontaa inaad garaacdo rikoorro kale oo badan, waxaad tahay qof gaar ah, oo ah hab ka baxsan dunida."
Xavi, oo haatan ah tababaraha kooxda heysata horyaalka Qadar Al Sadd, ayaa amaanay isaga talaadadii isagoo u qoray saaxiibkiis hore: "Hambalyo Leo !! Sharaf ayey tahay inaad rikoorkaan dhigato."
Guushii 4-1 ee ay ka gaareen Huesca ayaa u dhaqaaqday Barcelona inay afar dhibcood u jirto kooxda hogaanka haysa ee Atletico Madrid, kuwaasoo kaliya badiyay labo ka mid ah shantii kulan ee ay ciyaareen horyaalka.
Labada gool ee Messi ayaa ka yimid meel ka baxsan xerada ganaaxa, kabtanka kooxda ayaa caado ka dhigtay dhawaanahan inuu goolal dhaliyo meel fog.
Xogta Xog uruurinta ayaa muujineysa in 36 boqolkiiba goolashiisii ​​LaLiga xilli ciyaareedkii hore (9 ee 25) iyo 33 boqolkiiba xilli ciyaareedkan (7 ee 21) ay ka yimaadeen meel ka baxsan sanduuqa 18-yard.
Kuwaas ayaa ah qiimihii ugu sareeyay ee uu ku gaadhay waayihiisii ​​Barcelona waxayna u muuqdaan inay muujinayaan isbeddel ku yimaadda qaabkiisa ciyaarta marka uu ku soo dhowaado badhtamaha 30-naadkiisa.
Xilli ciyaareedkii 2011-12, markii uu Messi dhaliyay 50 gool oo LaLiga ah 37 kulan, kaliya seddex ka mid ah - ama boqolkiiba lix - ayaa ka yimid meel ka baxsan aagga rigoorada.
Maxay Somalia soo bandhigtay Maalintii labaad dhegeysiga dacwada Badda?